सौगात मल्लका फिल्म चलेनन्, तर उनी चले « Mazzako Online
सौगात मल्लका फिल्म चलेनन्, तर उनी चले
अभिनेता सौगात मल्ल अभिनित सिनेमा माइकल अधिकारीको छायांकन सुरु भएको छ । माइकल अधिकारीमा उनी प्रेमिका श्रृष्टी श्रेष्ठसँग काम गर्दैछन् । यो सिनेमाले सेरोगेसीको कथालाई उठाउनेछ । अभिनेता सौगात मल्ल अभिनित सिनेमा चलेका छैनन् ।
उनी अभिनित पछिल्लो सिनेमा माछा माछा त हलमा आएको र गएको नै थाहा भएन । तर, पनि सिनेमा बनाउने निर्माताले सौगातलाई लिन भने छाडेका छैनन् । सौगातलाई माइकल अधिकारीको छायांकन सकेपछि अझै एकपछि अर्को सिनेमा गर्नुछ । उनी, अभिनेत्री रेखा थापाले बनाउन लागेको सिनेमामा पनि अनुवन्धित भैसकेका छन् ।
यस्तै, उनी मधुसुदन भट्टराइको निर्देशनमा बन्न लागेको सिनेमा सँगसँगैमा पनि अनुवन्धित छन् । नेपालमा धेरै कलाकार छन् जसका सिनेमा नचलेपनि उनीहरु भने चलेका छन् । पछिल्लो समयमा सौगात मल्ल यसको बलियो उदाहरण बनेका छन् ।
पूजाको बारे पलले के भने ?
परदेशी २ मा केकीको जोडी प्रशान्त
आक्रामक सुरुवात गरेको ‘सेन्टी भइरस’ ले २ दिनमा कति कमायो ?
‘पर्खी बसे फर्की आउछु’ को शिर्ष गीत रेकडिङ
अमरदीपको निर्देशनमा ‘प्रेम पूजा’ निर्माण हुने